Sina Grosir ambongadiny lalao kilalao fantsona plastika bitika lalao sary orinasa sy mpanamboatra | Kylin
Amboaran-tsarimihetsika kilalao fanao amidy ambongadiny
Kitapom-batsy vita amin'ny plastika manokana, manaiky karazana endrika, pirinty ary habe izahay.
Prototyping ny sarivonganao sy ny miniitinao
Raha te hanao 1-2 pcs Miniature fotsiny ianao dia afaka mamorona ny prototype-nao izahay amin'ny alàlan'ny fampakaranao ny fandikana 3D anao.
Ho an'ny famokarana betsaka dia manolotra resina (QTY kely) sy famolahana tsindrona (QTY lehibe) hitazomana ny vidinao izahay.
Tongasoa eto hanontany.
Previous: Soso-kevitry ny tabilao manokana
Manaraka: Kianja vita amin'ny hazo any amin'ny lozisialy